စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ရေးသားလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ စာလေး…. – Shwe Naung
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ရေးသားလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ စာလေး….
N N | May 21, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော မင်းမော်ကွန်းဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းပီပြင်ပိုင်နိုင်စွ ာသရုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုကြီးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
မင်းမော်ကွန်းက လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ လှုထုနဲ့အတူ ထိပ်ဆုံးကနေ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ဘေးချိတ်ပြီး လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် အိမ်မက်တွေ မပျောက်အောင် တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ယောက်အနဲ့ စိတ်အားထက်သန် စွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက လမ်းမပေါ် ထွက်ထွက်ပြီး ပြည်သူလူနဲ့အတူ အမှန်တရာ းအတွက် တိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပါဝင်ခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့် ဝရမ်းထုတ် ခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း သူ့အနေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် ခုဆို မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာကာ တိမ်းရှောင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ တောင် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ကနေပြီး သတင်းအချက် အလက်တွေနဲ့အတူ ပြည်သူတွေ ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စာလေးတွေကို ဝေမျှပေး နေဆဲပါ။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း မင်းမော်ကွန်းရဲ့သားအငယ်ဆုံးလေးက အဖေဖြစ်သူနဲ့ ခွဲခွါနေရတာကြာလာပြီဖြစ်တဲံအတွက် အဖေကို အရမ်းလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ အဖေရှိတဲ့နေရာကို လိုက်မယ် ဆိုပြီး ပြင်ဆင်နေတဲ့ သားလေးကိုကြည့်ပြီး ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောပြလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်
မင်းမော်ကွန်းက “အဖေဆီသွားချင်လို့ သူ့ဟာသူပစ္စည်းတွေ ထည့်ထားတယ်တဲ့လေ ခဏစောင့်ပါဦးသားရယ်အဖေကိုယ်တိုင်တောင်ခုထိဟိုပြေးဒီလွှားနဲ့အတည်တကျမရှိသေးတာ ကျောပိုးအိပ်တစ်လုံးနဲ့ကျောတစ်ခင်းစာ နေရာကလွဲ ပြီးတနင့်တပိုးမျှော်လင့်ချက်တွေကလွဲပြီးတစ်စစီလိုက်ပြန်ကောက်နေ ရတဲ့ယုံကြည်ချက်တချို့တလေ ကလွဲပြီးအရင်းအနှီးကြီးလွန်းတဲ့ လိပ်ပြာသန့်သန့်တစ်စုံကလွဲပြီးချစ်ခြင်း
မေတ္တာနဲ့သတိရခြင်းတွေက လွဲပြီးခုချိန်ထိလမ်းပျောက်နေရုံကလွဲပြီးအဖေ့ဆီ မှာဘာမှမရှိ လို့ငါ့သားအတွက်ဘာတစ်ခုမှမတတ်နိုင်သေးတာအဖေ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယင် စာမျက်နှာကနေတစ်တင့် စိတ်မကောင်းစွာပြောပြလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ချင်းစီ တိုင်းကို ကျေးဇူ းတင်ရှိပါတယ်..။
Source ; Kyaw Kyaw Htay Lwin Facebook Acc
အ၀ါရောင်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေပေးပီး ပရိတ်သတ်ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် L-လစ်ရှားရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
စိတ်တူကိုယ်တူ အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေးနဲ့ ကောင်းမှု အတူပြုရင်း အေးချမ်းတဲ့ သာသနာ့ဘောင် မှာ ယောဂီဝတ် ကုသိုလ် ပြုခဲ့ကြတဲ့ မေကဗျာ…..
အတွင်းသား လှလှလေးတွေ မြင်သာစေတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..